Ashin Sumana၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
MaleMyeik, Tanintharyi DivisionMyanmar Like0members like this
ဘလော့များ (2)ဆွေးနွေးချက်များ (3)အဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ Ashin Sumana's Likes Ashin Sumana's ၏မိတ်ဆွေများ
အားလုံးကြည့်ရန်... Ashin Sumana's Discussions
Started this discussion. Last reply by 3hugiiftwckx6 Feb 13, 2012. 1 Reply
လူသားတိုင်း အချစ်နှင့် မကင်းနိုင်ကြပါ။ အဲဒါကြောင့် မိဘ သားသမီး အစ်ကို အစ်မ ညီ ညီမ ဆွေမျိုးစသည့် ပုံစံမျိုးနှင့် ချစ်နေကြသည်။ အဲဒီလို ချစ်ကြတဲ့အခါမှာ မချစ်တတ်လျှင်တော့ ပူ မည်။ ချစ်တတ်လျှင်တော့ မပူ ပါ။…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(စာပေ) မေတ္တာအစစ်နှင့် ဘယ်လိုချစ်မလဲ
Started this discussion. Last reply by အဖြူရောင်ငှက်ကလေး Feb 13, 2012.2Replies
လူသားတိုင်း အချစ်နှင့် မကင်းနိုင်ကြပါ။ အဲဒါကြောင့် မိဘ သားသမီး အစ်ကို အစ်မ ညီ ညီမ ဆွေမျိုးစသည့် ပုံစံမျိုးနှင့် ချစ်နေကြသည်။ အဲဒီလို ချစ်ကြတဲ့အခါမှာ မချစ်တတ်လျှင်တော့ ပူ မည်။ ချစ်တတ်လျှင်တော့ မပူ ပါ။…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(စာပေ) အားလုံးကြည့်ရန်...
Ashin Sumana သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
Ashin Sumana postedastatus"မိမိဘ၀မှာ အောင်မြင်ချင်ရင် စိတ်၏ကျွန် မဖြစ်ပါစေနှင့်၊ စိတ်၏ သခင် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။"May 26, 2012 0
ကျော်လင်းမောင် and Ashin Sumana are now friendsApr 22, 2012tintinmoe23@gmail.com leftacomment for Ashin Sumana"နာယူမှတ်သားသွားပါတယ်ဘုရား"Mar 24, 2012zin mar win commented on Ashin Sumana's blog post 'အားလုံးသော မွေးနေ့ရှင်များသို့ မွေးနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်'"တင်ပါ့ဘုရား။"Mar 2, 2012ရဲကျော် commented on Ashin Sumana's blog post 'အားလုံးသော မွေးနေ့ရှင်များသို့ မွေးနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်'"တင်ပါ့ "Mar 2, 2012Than Than Yin liked Ashin Sumana's blog post 'အားလုံးသော မွေးနေ့ရှင်များသို့ မွေးနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်'Mar 2, 2012နီစံ (အနီ) liked Ashin Sumana's blog post 'အားလုံးသော မွေးနေ့ရှင်များသို့ မွေးနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်'Mar 2, 2012kolayko commented on Ashin Sumana's blog post 'အားလုံးသော မွေးနေ့ရှင်များသို့ မွေးနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်'"တန်ဖိုးရှိပါ၏..."Mar 1, 2012ကလေးတို.ဆရာမ commented on Ashin Sumana's blog post 'အားလုံးသော မွေးနေ့ရှင်များသို့ မွေးနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်'"ူသာဓု - သာဓု - သာဓုပါဘုရား"Mar 1, 2012nyein nyein liked Ashin Sumana's blog post 'အားလုံးသော မွေးနေ့ရှင်များသို့ မွေးနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်'Mar 1, 2012Ashin Sumana postedablog postအားလုံးသော မွေးနေ့ရှင်များသို့ မွေးနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်မွေးနေ့မွေးရက်၊ ကုသိုလ်ဆက်၊ အသက်ရှည်တတ်သည်။ အသက်ရှည်လို၊ မွေးနေ့ကို၊ ကုသိုလ်ပြုရမည်။ ကုသိုလ်ပြုမှ၊ လူ့ဘ၀၊ နေရ ကြာရှည်မည်။လူ့ဘ၀မှာ နေရကြာ၊ သာသနာရှည်စွာ ပြုနိုင်မည်။တစ်နှစ်တစ်ခါ မွေးနေ့ပါ၊ လူမှာ ခေါ်ရိုးရှိ။ တကယ်ပြောင်းတာ၊ ရုပ်နာမ်ပါ၊ ခန္ဓာ မမြဲသိ။ ရုပ်နာမ်ဓမ္မ၊ မမြဲကြ၊ ခဏခဏ၊ ပြောင်းနေ၏။အသက် သိက္ခာ၊ ကြီးစရာ၊ လူမှာ နှစ်မျိုးရှိ။ အသက်ကြီးရုံ၊ အားမစုံ၊ အကုန်ကြောက်ရ၏။ အသိ မကြွယ်၊ အကျင့်ကွယ်၊ အိုပယ်ဖြစ်သွား၏။အသက် သိက္ခာ၊ ပြည့်မှသာ၊ လူမှာ စွမ်းရည်ပြည့်။ကြီးလေလှလေ၊ အေးမြပေ၊ လူတွေ ချစ်ကြ၏။အားလုံးသော…See MoreMar 1, 2012 4
Moe Moe Wah commented on Ashin Sumana's blog post 'မေတ္တာအစစ်နှင့် မေတ္တာအတု'"သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဘုရား"Feb 29, 2012Ashin Sumana postedastatus"ဘာအလုပ်ပဲ့ လုပ်လုပ် စေတနာထားပြီး စိတ်ဝင်တစား လုပ်ပါ။ အဲဒါ ပင်ပန်းရကျိုး နပ်မှာ။"Feb 29, 2012 0
Ashin Sumana posted blog postsမေတ္တာအစစ်နှင့် မေတ္တာအတုမေတ္တာအစစ်နှင့် မေတ္တာအတုFeb 28, 2012Ashin Sumana commented on Ashin Sumana's blog post 'မေတ္တာအစစ်နှင့် ဒီလိုချစ်ရမယ်'"လေ့လာသူ မိတ်ဆွေအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ သာသနာတော်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်သော သူတော်ကောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေ။"Feb 28, 2012Ashin Sumana leftacomment for မင်းအောင်မြတ်(ကိုတင့်လွင်)"လူပီသသော လူတစ်ယောက် ဖြစ်ရန်အတွက် လိုက်နာပြုကျင့်ရမည့် အရာတို့သည် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် သုံးပါးသာ ရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ရွှေစည်းမျဉ်းဟု ဆိုလျှင် ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုသုံးပါးတို့ကို ပွင့်တော်မူကြကုန်ပြီးသော ဘုရားရှင်အားလုံးတို့က…"Feb 28, 2012 More... RSS
ဒေါသသည် ဒေါသဖြစ်သူကိုရော အခြားသူများကိုပါ ပူလောင်စေသည်။ မီးနှင့်တူ၏။ မေတ္တာသည် မေတ္တာရှင်နှင့်တကွ သတ္တ၀ါအားလုံးကို ငြိမ်းချမ်းအေးမြစေသည်။ ရေနှင့်တူ၏။မီးအပူ မခံချင်ရင် ဒေါသမဖြစ်အောင် နေထိုင်ပါ။ဒေါသမဖြစ်အောင် ဘယ်လို နေထိုင်မလဲ? Ashin Sumana's Blog
အားလုံးသော မွေးနေ့ရှင်များသို့ မွေးနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်
ဒီဘလော့ကို March 1, 2012 တွင်7:45pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments
မွေးနေ့မွေးရက်၊ ကုသိုလ်ဆက်၊ အသက်ရှည်တတ်သည်။ အသက်ရှည်လို၊ မွေးနေ့ကို၊ ကုသိုလ်ပြုရမည်။ ကုသိုလ်ပြုမှ၊ လူ့ဘ၀၊ နေရ ကြာရှည်မည်။ လူ့ဘ၀မှာ နေရကြာ၊ သာသနာရှည်စွာ ပြုနိုင်မည်။
တစ်နှစ်တစ်ခါ မွေးနေ့ပါ၊ လူမှာ ခေါ်ရိုးရှိ။ တကယ်ပြောင်းတာ၊ ရုပ်နာမ်ပါ၊ ခန္ဓာ မမြဲသိ။ ရုပ်နာမ်ဓမ္မ၊ မမြဲကြ၊ ခဏခဏ၊ ပြောင်းနေ၏။
အသက် သိက္ခာ၊ ကြီးစရာ၊ လူမှာ နှစ်မျိုးရှိ။ အသက်ကြီးရုံ၊ အားမစုံ၊ အကုန်ကြောက်ရ၏။ အသိ မကြွယ်၊ အကျင့်ကွယ်၊ အိုပယ်ဖြစ်သွား၏။ အသက် သိက္ခာ၊ ပြည့်မှသာ၊ လူမှာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... မေတ္တာအစစ်နှင့် မေတ္တာအတု
ဒီဘလော့ကို February 28, 2012 တွင်8:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
တဏှာပေမ = တဏှာရာဂအချစ်နှင့် ဂေဟဿိတပေမ = မိသားစုအချစ် ဤနှစ် မျိုးကို ``မေတ္တာအတု´´ဟု ခေါ်ဆို၍ မေတ္တာပေမ = မေတ္တာအချစ်ကို ``မေတ္တာအစစ်´´ဟု ခေါ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ လင်နှင့်မယားစသော သူတို့၏ချစ်ခြင်းသည် လောဘအရင်းခံလျက်ရှိ သော သံယောဇဉ် မကင်းသည့် ချစ်ခြင်းဖြစ်၏။ လင်ယောက်ျားသည် ဇနီးသည်၏ (သို့ မဟုတ်) ဇနီးသည်သည် မိမိလင်၏ အဆင်း အသံ အနံ့ အတွေ့အထိတို့ကို မမြင်ရ၊ မကြားရ၊ မရှူရ၊ မတွေ့ထိရသောအခါ နှလုံးမသာမယာ ဖြစ်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်းစသည့် ကိလေသာတရားများ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ သို့ဖြစ်၍ တဏှာပေမ =… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... မေတ္တာအစစ်နှင့် ဒီလိုချစ်ရမယ်
ဒီဘလော့ကို February 13, 2012 တွင်11:49am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments
မေတ္တာအစစ်၊ မေတ္တာချစ်၊ ဘယ်လို ချစ်ရမယ်။ သတ္တ၀ါအများ၊ အကျိုးစီးပွား၊ လိုလားချစ်ရမယ်။ ကျောသား ရင်သား၊ မခွဲခြား၊ လိုလားချစ်ရမယ်။ ချစ်ငြား မုန်းငြား၊ မခွဲခြား၊ လိုလားချစ်ရမယ်။
သားသမီး လင်မယား၊ မခွဲခြား၊ လိုလားချစ်ရမယ်။
မိဘ ဆရာသမား၊ မခွဲခြား၊ လိုလားချစ်ရမယ်။
မေတ္တာအစစ်၊ မေတ္တာချစ်၊ ဒီလို ချစ်ရမယ်။
၁။ တဏှာရာဂအချစ် (တဏှာပေမ) ၂။ မိသားစုအချစ် (ဂေဟဿိတပေမ) ၃။ မေတ္တာအချစ် (မေတ္တာပေမ)
၁။… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... လူပီသသော ´´လူ``
ဒီဘလော့ကို February 13, 2012 တွင်10:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
မွေးဖွားပြီးသေ၊ မွေးပြီးသေ၊ ဒါတွေ မဆန်းပါ။ အကုသိုလ် သေ၊ ကုသိုလ်တွေ ရှင်သန်နေမှ၊ လူပီသ။
လူ့လောကမှာ ရှင်သန်နေရုံနှင့် မိမိကိုယ်ကို လူစင်စစ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီလို့ မမှတ်ယူနိုင်သေးပါ။ အကုသိုလ် ဒုစရိုက်အမှုများ ရှောင်ကြဉ်ပြီး ကုသိုလ် သုစရိုက်တရားများ အမြဲမပြတ် တိုးပွားနေအောင် ကြိုးစားအားထုတ်နေမှသာ ``လူပီသသော လူ ´´ တစ်ယောက် ဖြစ်လာမည်။ ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
2:06pm အချိန်March 24, 2012, တွင်tintinmoe23@gmail.com မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ နာယူမှတ်သားသွားပါတယ်ဘုရား 6:13pm အချိန်February 16, 2012, တွင်မင်းအောင်မြတ်(ကိုတင့်လွင်) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ တပည့်တော်အား လူပီသစေရန်၊ ထိုမှတစ်ဆင့်တက် လူ့ဘ၀ရရကျိုးနပ်စေရန် ဆိုဆုံးမပေးတော်မူပါဘုရား။ 3:00pm အချိန်January 12, 2012, တွင်whitecolor မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
mymother1221@gmail.com ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything hla moe 24 commented on Thaung Tan's blog post 'ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ'"ဗဟုသုတတွေရသွားပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"17 minutes agoThet Thet Oo liked ကောင်းမြတ်မင်း's group ဗုဒ္ဓဘာသာအမေးအဖြေကဏ္ဍ24 minutes agoSa Sa Khine liked thein wai's blog post 'ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ပုံပြတ်ပုံ တရားကို အလွယ်တကူ နားလည် သဘောပေါက်ကြစေရန်။'47 minutes agoကလေးတို.ဆရာမ commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'ဒီနေ့လည်း လွန်ဆွဲဦးမယ်'"မှန်ပါတယ် “လွန်ဆွဲဦးမယ်“ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးက အဓိကကျနေပါတယ်--…"1 hour agoThet Thet Oo and lin htike joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺1 hour agoSa Sa Khine liked ကိုညီညီတင်'s blog post '"လူ လူချင်း ရှိခိုးခြင်း"'3 hours agoSa Sa Khine liked မူကြိုဆရာ's blog post '“သမထနှင်.၀ိပဿနာ”(အားထုတ်ယောဂီများအတွက်အထူး)'3 hours agoSa Sa Khine liked Thaung Tan's blog post 'တစ်ရက် နဲ့တစ်ရာ'3 hours agoမောင်သုည commented on မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'"အခုကိုပြင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်"5 hours agoHtain Lin Oo liked မူကြိုဆရာ's blog post '“သမ္မပ္ပဓာန် လေးပါး (တရားအားထုတ်ခြင်း လုံ့လ လေးမျိုး)”'5 hours agoအရှင်ဝဏ္ဏ commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'ဒီနေ့လည်း လွဲဆွဲဦးမယ်'"ဟုတ်ပ ပြင်ပေးပါဦး ဒကာမ"5 hours agoThaung Tan posted blog postsတစ်ရက် နဲ့တစ်ရာရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ6 hours ago More... RSS